Faahfaahin kasoo baxeysa qarax Caawa ka dhacay magaalada Muqdisho | Somali Link Newspaper
Guriga Breaking News Faahfaahin kasoo baxeysa qarax Caawa ka dhacay magaalada Muqdisho
Faahfaahin kasoo baxeysa qarax Caawa ka dhacay magaalada Muqdisho
Jimco, May, 28, 2021 ( HOL ) – Qaraxan oo ahaa mid jugtiisa laga maqlay xaafado badan oo ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa ka dhacay agagaarka Isgoyska KM-4 gaar ahaan wadada aada garoonka Aadan Cadde nawaaxiga Hotal Afrik.
Qaraxa ayaa la sheegay inuu ahaa nooca dhulka lagu aaso ee Miinada la dhigo hareeraha wadada, waxaana lala beegsaday gaari nooca aanan xabada karin oo uu saarna sarkaal ka tirsanaa Booliiska Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamed Daahir.
Sarkaalka qaraxa lala beegsaday ayaa ka badbaaday weerarka waxana la sheegay inuu ku dhaawacmay qaraxa miino mid ka mid ahaa ilaaladiisa.
Ciidamo ka tirsan Booliiska Soomaaliya ayaa gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay waxayna baaritaano ka bilaabeen goobta inkastoo aaysan jirin ilaa hadda cid loo soo qabtay qaraxaasi.
Article horeXukuumadda Soomaaliya oo ku dhawaaqday in la xalinaayo tabashada reer Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle
Article soo socdaSomali security forces trained on Human Rights and Child Protection